I-DA eKZN ifuna kuphenywe ukuthi baxwayiswa yini abantu ngesiphepho | News24
I-DA eKZN ifuna kuphenywe ukuthi baxwayiswa yini abantu ngesiphepho
Durban – IDemocratic Alliance esifundazweni iKwaZulu-Natal ifuna uhulumeni aphenye ukuthi kwakukhona yini okwakungenziwa ukugwema ukushona kwabantu ngesikhathi kuhlasela isiphepho esifundazweni ngeledlule.
"Kudingeka uphenyo olunzulu ngokushesha futhi i-DA izolokhu imile ekutheni kumele aphekwe ngemibuzo uNgqongqoshe kanye nezikhulu eziphezulu.
"Ikakhulukazi, kuzomele kutholakale ukuthi kwakukhona yini okwakungenziwa ngaphambi kokuba isiphepho sifike, kugcine kugwemekile ukushona kwabantu,” kusho ilungu le-DA eSishayamthetho, uHlanganani Gumbi, ngoMsombuluko.
UGumbi uthe ubhalele uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana kanye neziNdaba zoMdabu, uNomusa Dube-Ncube noMnyango wakhe, ecela umbiko ngezinhlelo zethimba lezinhlekelele zokuxwayisa ngokushesha abantu esifundazweni.
OLUNYE UDABA: Uvale ngentombazane ebulawe yashiswa eFolweni
"Iningi lezakhamuzi kufike isiphepho zingalindele. Kubalulekile ukuba kuthathwe izinyathelo ukuqinisekisa ukuthi okwenzeka akuphindeki ngokuzayo, njengoba abantu baseThekwini bengene engozini ngenxa yokwehluleka kukahulumeni ukubaxwayisa.”
UGumbi usishayele ihlombe isinqumo seKhabhinethi lesifundazwe sokuba isifundazwe sithathwe njengendawo yenhlekelele kulandela isiphepho.
"Lesi sinqumo sizokwenza ukuba kutholakale ezinye izimali kuhulumeni kazwelonke ukuze kusizakale abantu abaningi abakhahlanyezwe yilesi simo.”